Tag Archive for "अविवाहित" - अब अविवाहित महिलालाई पनि भत्ता !
बनेपा । पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारद्वरा निर्धारित मापदण्डमा नपरेका महिलालाई पनि लाभग्राहीको दायरामा ल्याई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाको यस योजनाअन्तर्गत ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित महिला, सम्बन्धविच्छेद भएका महिला र पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष पूरा भएका महिलालाई लाभग्राहीका रुपमा समेटिएको छ। ‘संघीय सरकारले अविवाहित र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि मा... थप पढ्नुहोस्
सुन्दर महिला किन अविवाहित हुन्छन् ? थाहा पाउनुस
काठमाडौं । तपाईंले आफ्नो सुन्दर महिला साथी अविवाहित रहेको देख्नुभएकै होला। अनि तपाईंले कतिपटक त सोध्नुभएको पनि होला, ‘किन यति सुन्दर र स्मार्ट भएर पनि अहिलेसम्म सिंगल ?’ विदेशतिर प्रायः विवाहको उमेर पुगेका महिला सुन्दर र स्मार्ट हुँदाहुँदै पनि अविवाहित हुन्छन्। पछिल्लो समय यो ट्रेन्ड नेपालमा पनि छ। कतिपय सुन्दर र अब्बल महिला पनि अविवाहित हुन्छन्। उनीहरुलाई प्रश्नको ओइरो हुन्छ, ‘किन अहिलेसम्म विवा... थप पढ्नुहोस्